Things To Do After Getting the Promotion You Deserve for the First Time ﻿
သင့်ရဲ့ Career လမ်းကြောင်းကို စတင်လျှောက်လှမ်းခဲ့စဉ်က သင့်အတွက်၊ သင်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အစောဆုံးသော ရည်မှန်းချက်များတွင် ရာထူးတိုးဖို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ လများစွာ၊ ဒါမှမဟုတ် နှစ်များစွာ အချိန်ယူရနိုင်သော်လည်း သင့်ရဲ့ကြိုးစားလုပ်ကိုင်မှုများရဲ့ အသီးအပွင့်အနေနဲ့ ရာထူးမှတိုးမြှင့်ပေးခံရခြင်းဟာ တချိန်ချိန်မှာတော့ ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကဲ့သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ရာထူးတိုးပေးခြင်းခံရတဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ လစာဘယ်လောက်ပိုရမှာလဲ? ဆိုတာကို အရင်ဆုံးတွေးမိကောင်းတွေးမိနိုင်ပါတယ် . . . လစာဟာ သိသိသာသာတိုးသွားမှာလား (သို့မဟုတ်) အနည်းငယ်သာ တိုးမှာလား၊ သင့်အတွက် သီးသန့်ရုံးခန်းတစ်ခန်းပေးထားမှာလား ဒါမှမဟုတ် အခုလက်ရှိနေရာကပဲဆက်လုပ်ရမှာလား? ဒါပေမယ့် ဒီမေးခွန်းတွေထက် ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
ရာထူးတိုးခြင်းခံရပြီဆိုတာနဲ့ သင့်ရဲ့ တာဝန်၊ ဝတ္တရားတွေကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်သလို အလုပ်အပေါ်/ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်မြင်တဲ့ သင့်ရဲ့အမြင်တွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက သင့်အပေါ်မြင်တဲ့ အမြင်တွေဟာလည်း ပြောင်းလဲသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရာထူးတိုးခြင်းခံရပြီဆိုတာနဲ့ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အချက်လေးတွေကို www.jobsinyangon.com ကနေ တင်ဆက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ စီမံခန့်ခွဲမှုနေရာများသို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းခံရပါက သတိနဲ့နေထိုင်ပါ။
အကယ်၍ ဒါဟာသင့်အနေနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် စီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများသို့ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းခံရတာဖြစ်ပါက မြန်ဆန်စွာအပြောင်းအလဲများကိုပြုလုပ်လိုပြီး အရာရာတိုင်းကို မိမိသဘောကျဖြစ်လိုစိတ်ကို ချုပ်ထိန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ထံတွင် တာဝန်ယူထားရတဲ့အရာများ များစွာရှိလာနိုင်ပြီး များသောအားဖြင့် သင်တွေ့ကြုံနေကျအရာတွေ၊ သင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားအရာတွေထက် ပိုများတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ဖြေရှင်းရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကုမ္ပဏီရှိအခြားသော Manager များနဲ့ ပေါင်းသင်း၍ လိုအပ်တဲ့အခါ သူတို့ထံမှ ရံဖန်ရံခါအကြံတောင်းပါ၊ အကူအညီများရယူပါ။ အခြေအနေတစ်ခုကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ သင်မသိပါက သူတို့ကိုအကူအညီတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား မန်နေဂျာတိုင်းထံက သင့်ကိုပြောလာနိုင်တဲ့အကြံပေးစကားတစ်ခုကတော့ “ကိစ္စတိုင်းကို ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန် လုပ်ဆောင်ဖို့” ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
HR ပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Donald Nickels ရဲ့ အကြံပြုချက်တစ်ခုအရ “ပြောင်းလဲမှုများကို မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့အရာများမှလွဲပြီး ပြုလုပ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ Manager အသစ်တစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီးမကြာမှီ နှစ်အတန်ကြာရှိနေပြီးသားလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရှုပ်ထွေးသွားအောင် ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဟာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို ပိုမို၍ ဆိုးရွားသွားစေနိုင်ပါတယ်။”
၂။ မြန်ဆန်စွာ အရှိန်ရအောင် ကြိုးစားပါ။
သင့်ရဲ့ ပထမဆုံး ရက်သတ္တပါတ်အနည်းငယ်ဟာ ဒီရာထူးနေရာတွင် သင်ရှိနေသမျှနောက်ပိုင်းကာလတလျှောက်ရဲ့ အခြေအနေကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ သူဌေးကလည်း သူ/ သူမဟာ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြုလုပ်မိရဲ့လားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်အတည်ပြုနေမှာဖြစ်သလို သင့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားများနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလည်း သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ သင့်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံကို နှစ်သက်မှုရှိ၊ မရှိကို စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ရာထူးအသစ်တွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရစဉ်တွင် သင့်အနေနဲ့ မြန်ဆန်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ “အောင်မြင်မှုများ” ကို ရယူနိုင်ဖို့ စတင်ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ “သင့်ရဲ့ team member များနဲ့ သင့်ရဲ့ သူဌေး အစရှိသူတို့နဲ့ တစ်ဦးချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အခါ သူတို့နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဘယ်အရာက သူတို့အတွက် အဓိက အခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့အရာတွေလဲဆိုတာကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပါ” ဟူ၍ Career Blogger တစ်ဦးဖြစ်သူ Celine Tarrant က အကြံပေးထားပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်အနေနဲ့ ဒီအခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါက သင့်အနေနဲ့အရှိန်ရလာမှာဖြစ်ပြီး လူအများမှသင့်ကိုထောက်ခံလာစေဖို့အတွက်တွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရာထူးအသစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့အခါတွင် သင့်အနေနဲ့ action ယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ action ယူခြင်း မပြုလုပ်ပဲ စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့အကြား ဟန်ချက်မျှနေစေရန် အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကျတဲ့အချက်ကတော့ လူအများစုအတွက် အကျိုးရှိစေနိုင်မည့် ပြောင်းလဲချိန်ညှိမှုများကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ရန် လွယ်ကူစေမည့်အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေ၍ ပိုမိုကြီးမားတဲ့၊ လူအများရဲ့ထောက်ခံမှု မရနိုင်မယ့် (Controversial ဖြစ်မယ့်) ဆုံးဖြတ်မှုများကို နောက်မှပြုလုပ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်များကို ချရေးထားပါ။
သင့်အနေနဲ့ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းခံရပြီဆိုတာနဲ့ အရာရာတိုင်းဟာ မြန်ဆန်စွာပြောင်းလဲလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အကြောင်းအရာအသစ်များကို သင်ယူလေ့လာရခြင်း၊ လူအသစ်များနဲ့ တွေ့ဆုံအသိအကျွမ်းပြုလုပ်ရခြင်း၊ နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ယခင်က သင့်လက်ရှိရာထူးတွင် တာဝန်ယူသွားခဲ့သူမှ ချန်ထားရစ်ခဲ့သည့် ကိစ္စများကို ဖြေရှင်းရခြင်း အစရှိတဲ့အရာများကို ပြုလုပ်လာရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်များကို ရာထူးတိုးပေးခြင်းခံရသည်ကို သိသိခြင်းတွင် ချရေးထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ - သင့်ကိုကြာသပတေးနေ့ နေ့လည်တွင် သင့်ရဲ့သူဌေးက သင့်ကိုရာထူးတိုးပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားလာပြီး တင်္နလာနေ့မှစ၍ အဆိုပါရာထူးနေရာတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဟု အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါက နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ သောကြာနေ့တွင် သင်တာဝန်ယူရမည့် အဆိုပါရာထူးအသစ်အကြောင်း အချက်အလက်များကို ရှာဖွေစုဆောင်းပါ၊ မည်သည့်အရာတွေဟာ လက်ရှိတွင် ဘယ်အထိခရီးပေါက်လျှက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ ပြီးနောက် ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း သင့်အတွက်ရော သင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် ရာထူးနေရာအတွက် သင့်လျော်မှုရှိတဲ့ ရေတိုနှင့် ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များကို စီစဉ်သတ်မှတ်ပါ။ ဒီရည်မှန်းချက်တွေဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲမှုရှိလာနိုင်သော်လည်း အစီအစဉ်အချို့ရှိထားခြင်းဟာ အထူးသဖြင့် အလွန်အလုပ်ရှုပ်လာနိုင်တဲ့ ကနဦးကာလများတွင် သင့်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
၄။ လူတစ်ဦးချင်းစီတိုင်းကို လေးစားသမှုဖြင့်ဆက်ဆံပါ။
သင့်ရဲ့ personality (စိတ်နေစိတ်ထား) နဲ့ သင်တွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်းကို ခံရခြင်းဟာ သင့်ကိုအောင်မြင်မှုများကိုရရှိလိုက်တယ်လို့ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်-ဒါက မလွဲမသွေကို ဖြစ်မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီကဲ့သို့ မိမိဟာ အရေးပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီလို့ တွေးထင်လာခြင်းကနေ ဘဝင်မြင့်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းလာခြင်းကို သင့်ဘက်က လုံးဝ ခွင့်မပြုပေးလိုက်မိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘဝတွင် အောင်မြင်မှုများကို ရရှိနိုင်ရန် career တစ်လျှောက်တွင် နောက်ထပ်ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးမှုတွေကို ရရှိနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဆက်ဆံရေးများကို မပျက်ပြားစေပဲ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံမှုများကို တည်ဆောက်နိုင်စေဖို့ တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးအကြား အပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
“သင်ရာထူးတိုးသွားတာနဲ့ အခြားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို မတူ မတန်သလို ဆက်ဆံနေခြင်းဟာ ရေရှည်တွင် သင့်အတွက် နစ်နာမှုများကိုသာ ဖြစ်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟူ၍ Career Blogger တစ်ဦးဖြစ်သူ Kate Matsudaira နှင့် Kate Stull တို့က သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ အခြားသောသူများက သင့်ကို မကောင်းပြောနေခဲ့ရင်တောင်မှ (negative တွေပဲ ပေးနေခဲ့ရင်တောင်မှ) သင့်ဘက်က အရာရာတိုင်းကို အကောင်းဖက်သို့ ဦးတည်လာစေဖို့အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်ရာထူးတိုးခံရခြင်းမှ အကောင်းဆုံးရလာဒ်ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် . . .
သင့်ရဲ့ career လမ်းကြောင်းတွင် ရလာဒ်အချို့ကို ရရှိလာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရတဲ့အပြင် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များရဲ့ လေးစားမှုကိုလည်း ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ပထမဆုံးအကြိမ် ရာထူးတိုးခြင်းဟာ လွန်စွာပျော်ရွှင်ရပြီး စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံး ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ရာထူးတိုးပေးခြင်းခံရတာဟာ ဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာရှိပါသေးတယ်။ ဒီနေရာတွင် ထူးချွန်လာဖို့အတွက် သင့်အနေနဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို မှန်ကန်စွာကိုင်တွယ်မှုပြုလုပ်ပြီး သင်ဟာ ဒီရာထူးနဲ့ထိုက်တန်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြသပေးဖို့တော့ လိုအပ်ပါဦးမယ်လို့ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီ article လေးက စာဖတ်သူပရိသတ်တို့အတွက် အသုံးဝင်စေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်